Warbixinta weriyayaasha la dilay ee caalamka - BBC News Somali
Warbixinta weriyayaasha la dilay ee caalamka
2 Juunyo 2011
Image caption Qaar ka mid ah weriyaasha dhibaatada loo geystay
Urur u dooda xuquuqda warfidiyeennada oo marka la soo gaabiyo lagu magacaabo CPJ, ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen waddammada lagu dhibaateeyo waridiyeennada adduunka oo meelaha qaarkood inta lagu laayo weriyeyaasha haddana dadkii dilka geystay suuqyada iska marmaraan iyadoo aan la soo qaban.
In ka badan 251 weriye ayaa lagu dilay 13 waddan tobankii sano ee ugu danbeeyay kuwaasi oo hey'adda CPJ ay sheegeyso in dadkii dilay aan la helin oo cadaaladda la horgeyn.
Warbixinta guddigan u dooda xuquuqda weriyayaasha oo fadhigiisu yahay magaalada New York, ayaa sheegeysa in dadkii falkaasi geystay oo aan la ciqaabin inay keento in saxaafadda la aamusiyo ama ay iyagu jasuuro isku sameeyaan cabsi ay qabaan awgeed.
Hey'addu haddaba dalalka ay soo hadal qaaday ee dhibaatada ugu badan ay ka jirto waxaa ka mid ah Iraq, Soomaaliya, Philippines iyo Sri Lanka, oo ay ku tilmaantay inay yihiin wadamada ugu xun ee weriyayaashu ay ka hawlgalaan.
Image caption Guddiga CPJ waxa uu u doodaa xuquuqda weriyayaasha
Xaaladda weriyayaasha Mexico ayaa ka soo dartay, halka xaaladda kuwa ka hawlgala Ruushka ay ka soo reysay sanadkii 2010.
Qaar badan oo ka mid ah weriyayaasha la dilay ayaa loo hanjabay inta aan la dilin sababtoo ah wax difaaca ayay waayeen sida CPJ ay sheegeyso.
Soomaaliya marka ay ka hadleysay CPJ waxa ay sheegtay inay jiraan toban weriye oo la dilay tobankii sano ee ugu danbeeyay oo aan ilaa hadda xal loo helin sababta, waxaana Soomaaliya ay hey'addu gelisay heerka ugu xun qaaradda Afrika, halka dunidana ay tahay meesha alabaad uu ugu ba'an, Weriyayaasha la dilay waxaa ka mid ahaa Sheikh Nur Mohamed Abkey, oo la jir dilay markii danbena dhawr jeer xabad lagu dhuftay bishii May 2010.
Ku dhawaad 60 suxufiyiin Soomaali ah ayaa isaga qaxay dalka sanadihii ugu danbeeyay, waxaana ay CPJ sheegtay in kuwa hadda ku haray dalkii inay ku shaqeeyaan xaalado adag oo ay iyagu jasuuro isku sameeyaan si ay u badbaadaan.